Ukhenketho lwasePalestine lwalahleka ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ngenxa yobhubhane
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IPalestine Breaking News » Ukhenketho lwasePalestine lwalahleka ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ngenxa yobhubhane
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • IPalestine Breaking News • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Nangona urhulumente wasePalestine ewanciphisile amanyathelo okhuseleko kunye nezithintelo ngokuchasene ne-coronavirus, kwaye wavumela onke amacandelo ukuba asebenze ngesiqhelo, icandelo lezokhenketho, ikakhulu eBhetelehem, lisasokola.
Icandelo lokhenketho kwiPalestina Territories ligcina liwohloka ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
Iipesenti ezingama-77.2 zeendwendwe zehotele kwi-West Bank ngama-Israeli-ama-Arabhu, ama-22.5 eepesenti ngabemi be-West Bank kunye neepesenti ezingama-0.3 zeendwendwe ezivela phesheya.
Imimandla yasePalestine ineendawo ezimbini ezahlukileyo: i-West Bank (kubandakanya neMpuma yeJerusalem) kunye neGaza Strip.
Ingxelo esemthethweni yoSuku lwezoKhenketho ePalestina, epapashwe namhlanje, ithe icandelo lokhenketho lasePalestine lilahlekelwe ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhane we-coronavirus kwiindawo zasePalestine.
Ingxelo, epapashwe ngokudibeneyo yiPalestine Central Bureau of Statistics kunye nomphathiswa wezokhenketho kunye nezinto zakudala, yongeze ukuba ukusebenza kwecandelo lezokhenketho ePalestine kugcina ukwehla ngenxa ye-COVID-19, ngakumbi kwisixeko saseWest Bank eBhetelehem.
Ngokwengxelo, iipesenti ezingama-77.2 zeendwendwe zehotele kwi-West Bank ngama-Israel-Arabs, 22.5% yabemi be-West Bank kunye ne-0.3% kuphela evela phesheya.
"Nangona urhulumente wasePalestine ewanciphisile amanyathelo okhuseleko kunye nezithintelo ngokuchasene ne-coronavirus, kwaye wavumela onke amacandelo ukuba asebenze ngesiqhelo, icandelo lezokhenketho, ikakhulu eBhetelehem, lisasokola," yatsho ingxelo.
The basePalestina Territories Inendawo ezimbini ezahlukileyo: i-West Bank (kubandakanya neMpuma yeJerusalem) kunye neGaza Strip.
Ukhenketho kwi basePalestina Territories kukhenketho eMpuma Yerusalem, kwiWest Bank, naseGaza Strip. Ngo-2010, zizigidi ezi-4.6 zabantu abatyelele imimandla yasePalestine, xa kuthelekiswa ne-2.6 yezigidi ngo-2009. Kwelo nani, i-2.2 yezigidi yayingabakhenkethi bamanye amazwe ngelixa i-2.7 yezigidi yayingamakhaya.
Kwikota yokugqibela ka-2012 iindwendwe ezingaphezu kwe-150,000 zahlala kwiihotele zaseWest Bank; I-40% ibiseYurophu kwaye i-9% ibisuka eMelika naseKhanada. Izikhokelo zokundwendwela ezinkulu zibhala ukuba “i-West Bank ayisiyondawo ilula onokuhamba kuyo kodwa iinzame zawo zivuzwa ngokutyebileyo.